बेल्जियम भर्सेस पोर्चुगल: हेड टु हेडमा को अगाडि? | सबै खेल
बेल्जियम भर्सेस पोर्चुगल: हेड टु हेडमा को अगाडि?
१३ असार २०७८, आईतवार १७:१०
आज जारी युरोकपकै सबैभन्दा ठूलो भीडन्त हुँदै छ। राति १२ः४५ बजे स्पेनको सेभियामा हुने हेबिवेट भिडन्तमा फिफा वरियताको नम्बर १ टिम बेल्जियम युरोकपको डिफेन्डिङ च्याम्पियन पोर्चुगलसँग भिड्दै छ।
पछिल्ला केही वर्षयता बेल्जियमले निन्तार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको छ भने पोर्चुगल पनि अहिले उत्कृष्ट लयमै छ । त्यसैले यो भीडन्त रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यी दुई टिम कुनै पनि ठूला प्रतियोगितामा पहिलो पटक भिड्न लागेका हुन्, तर पनि यी टिम एकआपसमा परिचित छन्। यी दुई टिम १८ पटक आपसमा भिडेका छन्।
ती १८ भीडन्तमा पोर्चुगल ६ खेलमा विजयी हुँदा बेल्जियमले ५ खेल जितेको छ । यस्तै, यी दुई बीचको ७ भिडन्त बराबरीमा सकिएको छ।
युरोकप छनोटमै पोर्चुगल र बेल्जियम ६ पटक आमनेसामने भएका छन्। पछिल्लोपटक २००८ को युरोकप छनोटमा भिँड्दा रोनाल्डोको दुई गोलको मद्दतमा पोर्चुगलले लिस्बोनस्थित घरेलु मैदानमा ४–० को एकतर्फी जित निकालेको थियो भने ब्रसेल्समा भएको भिडन्तमा पनि २–१ को जित हात पारेको थियो।
विश्वकप छनोटमा भने बेल्जियमले पोर्चुगललाई धुलो चटाएको थियो। १९९० को विश्वकप छनोटमा लिस्बनमै भएको खेलमा बेल्जियमले ३–० को जित निकालेको हो।
यी दुईबीचको पछिल्ला दुई खेल भने मैत्रीपूर्ण थिए। २०१६ मा भएको खेलमा रोनाल्डोले गोल गर्दै पोर्चुगललाई २–१ ले जिताएका थिए। २०१८ मा दुई टिमले गोलरहित बराबरीमा खेलेका थिए।
जारी युरोकप २०२० मा पोर्चुगल र बेल्जियमबीचको खेल यसअघिका खेलभन्दा धेरै कारणले हेर्नलायक हुनेछ। यसअघि कहिल्यै कुनै प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगितामा नभिडेका कारण पहिलोपटक दुई टिमको फुलस्केलमा वास्तविक प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
साथै, बेल्जियम र पोर्चुगल दुवै देशको यसपटकको टिम उनीहरुको इतिहासकै सबैभन्दा उत्कृष्ट टिम हो। युरोपका स्टार खेलाडीले भरिपूर्ण दुई टिमबीचको खेल यो वर्षकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय भिडन्तका रुपमा पनि व्याख्या गरिँदै आएको छ।
दुई टिमबीचको विजयी टिमले २ जुलाईमा जर्मनीको म्युनिखमा हुने क्वार्टरफाइनलमा इटालीसँग सेमिफाइनल प्रवेशका लागि भिडन्त गर्ने छ।
Tags: belgium, Euro cup 2020, Protugal
ए डिभिजन लिग ६ महिनासम्म गर्ने एन्फाको तयारी
क्रोएसियाका पेरेसिचलाई कोराेना संक्रमण, स्पेनविरुद्धको खेल गुमाउने